Saddex arrin oo laga baahiyay maqnaanshaha Ikraan Tahliil iyo xog cusub oo soo korortay - Allbanaadir
Home Warka Maanta Saddex arrin oo laga baahiyay maqnaanshaha Ikraan Tahliil iyo xog cusub oo...
Saddex arrin oo laga baahiyay maqnaanshaha Ikraan Tahliil iyo xog cusub oo soo korortay
Ku dhowaad muddo bil ah, dowladda Soomaaliya ayaa aamusnaan ugu jawaabeysa qoyska gabar 23- jir ah oo xubin sarre ka ahayd hay’adda mukhaabaraadka qaranka oo la waayey fiidnimadii 26-ka June, 2021-ka.
Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd madaxa waaxda ammaanka internet-ka ee NISA ayaa gaari ay hay’addu leedahay habeenkaas kasoo kaxeeyay hoygeeda iyadda oo “ruuxa wadday uu ka dalbadey in ay horey u soo qaadato computer-keeda”.
Kahor inta aysan muddo kooban ka shaqeyn xafiiska agaasimaha guud markii ay hay’addu ku biirtay April, sanadka markii uu ahaa 2017-kii, Ikraan ayaa kadib waxaa loo dalacsiiyey madaxa guud ee xafiiska arrimaha bini’aadanimadda iyo jinsig.
Agaasime ayuu ka noqotay xafiiska duqa Muqdisho intii uu xilka hayey Injineer Yariisow kaasoo laba sano kahor ay Al-Shabaab ku dishay weerar ismiidaamin oo xafiiskiisa ka dhacay.
Saddexda Kutirikuteyn Xilli aysan jirin cid si madax-banaan u xaqiijin karta sababta loo watay, nolol iyo geeri waxay ku sugan tahay, waxaa jira saddex faallo oo ay isku raaceen madaxdii hore ee hay’adda iyo xeeldheereyaal ka hadlay qadiyadda Ikraan Tahliil.
Agaasimihii hore ee NISA, Cabdullaahi Sanbaloolshe, ayaa aaminsan in Ikraan ay “dhibane u tahay xog xasaasi ah oo ay ogtahay” ama “in uu computer-keeda ay ku jirto xogta diiwaangelinta askarta sida qarsoodiga loogu diray Eritrea”.
Cabdisalaam Guuleed, taliye ku xigeenkii hore ee isla hay’adda oo tibaaxay in Ikraan ay kamid ahayd shaqsiyaadka sida dhow ula socdey kiiska barista dilkii Yariisow, ayaa rumeysan haddii la xaqiijiyo in sababahan kor ku xusan loo beegsaday “ay noqon karto sabab weyn iyo dowladda rabto in ay tirtirto raadka”.
Intaas waxaa wehlisa, dad u jaranjeera dowladda ayaa faafinaya sheegashooyin aad u xooganeyn oo ah in suurtagal ay tahay in Ikraan waajibaad ama tababar qarsoodi ah loogu diray gudaha ama dibada. Hase ahaatee, warkaas ma hayaan qoyska.